Fangaraharan�ny fifidianana Iantohanay, hoy ny CENI
Tsy nihambahamba ny filohan�ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI, Hery Rakotomanana, nampahafantatra tamin�ireo mpanao gazety tonga tetsy
Antaninarenina omaly, nandritry ny fanokafana ilay atrikasa fandravonana ireo hevi-dehibe ho fandrafetana ny paikadim-pirenena ho fanabeazana sy ho fanentanana ara-pifidianana fa dia hiantoka ny fangaraharana rehetra mikasika ny fikarakarana ny fifidianana. Izaho, filohan’ny CENI mihitsy miaraka amin’ny mpikambana rehetra no manome antoka ny fangaraharana amin’ny fifidianana. Efa porofo izao fa ny hevitry ny rehetra no nalainay fa tsy nikononkonona samirery ny CENI. Ho mpanatanteraka izany fotsiny izahay rehefa tonga ny fotoana. Izay fakana ny hevitry ny maro izay no tena fangaraharana. Mikasika ilay resaka fa lasa resa-pianakaviana moa ny mpikambana mandrafitra ny CENI dia nilaza ny tenany fa mety misy tokoa ny mpihavana ao anatin’ny mpikambana saingy anjaranareo mpanao gazety, hoy ny tenany no manadihady na tena betsaka tokoa na tsia.
10.000.000 ny mpifidy hotratrarina
Araka ny tombana nataon’ny CENI moa dia 8.600.000 izao no isan’ireo mpifidy voasoratra anarana ka ezaka hatao ny hanatrarana izany ho 10.000.000 amin’ny taona 2018. Ny resaka fanentanana sy fanabeazana hatrany moa no tena ezahan’ity vaomiera ity avoitra rehefa manakaiky toy izao ny ora kanefa dia any amin’io resaka fangaraharana io hatrany no tena fototry ny ahiahy rehetra ary rehefa ao anatin’ny fotoana hisian’ny fandatsaha-bato hatrany ihany koa no mipoitra ny gaboraraka rehetra. Nanome toky toy izao ihany koa ny filohan’ity vaomiera ity teo aloha fa tsy atahorana hisy hosoka ny fifidianana satria arifomba ny fitaovana. Nilaza izy taty aoriana fa nisy nahavita nangalatra ihany tao. Taorian’izay dia mbola niverina nilaza indray ny tenany fa nizotra tsara araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Tsy any amin’ny resaka fanentanana no tokony hipetrahan’ny fanontaniana fa any amin’ny resaka fangaraharana. Tsiahivina fa ity filohan’ny CENI ankehitriny ity no efa filohan’ny CENIT voalohany ary anisan’ny niteraka resabe tamin’ny fotoan’androny ilay fifidianana tamin’ny alalan’ny karnem-pokontany.